Chii chinonzi hupfumi: mhando dzehupfumi uye tsananguro | Ehupfumi Zvemari
Chii chinonzi hupfumi
Encarni Arcoya | 06/06/2021 17:51 | Yakagadziridzwa ku 06/06/2021 17:54 | General hupfumi
Kutsanangura kuti chii hupfumi hakusi nyore. Muchokwadi, kunyangwe iine pfungwa, izwi iro pacharo chinhu chakakura kwazvo uye, kune vazhinji, rakaoma kunzwisisa 100%, kunyangwe kune nyanzvi dzezvehupfumi.
Nekudaro, kana iwe wagara uchida ziva kuti hupfumi chii, chii chiri chinangwa chayo, ndedzipi mhando dziripo uye zvimwe zvacho, saka uyu muunganidzwa watakagadzirira unogona kukubatsira kudzikamisa kuda kuziva kwaunonzwa nezvenyaya iyi.
1 Chii chinonzi hupfumi
1.1 Hunhu hwehupfumi
2 Unobva kupi
3 Mhando dzehupfumi
Pfungwa dzehupfumi pane dzakawanda. Izvo zviri nyore kunzwisisa kwete zvakanyanya. Kana isu tikaenda kuRAE totsvaga izwi rezvehupfumi, iyo dudziro yainotipa ndeiyi inotevera:
"Sayenzi inodzidza nzira dzinoshanda kwazvo dzekugutsa zvinodiwa nevanhu, kuburikidza nekushandisa zvinhu zvishoma."
Izvi zvatove kujekesa nyaya zvishoma, asi chokwadi ndechekuti kune akawanda mazano ekufunga nezve hupfumi. Zvimwe zvinonyanya kuzivikanwa ndezvi:
"Economics ndiyo yekudzidza kwevanhu mukushanda kwayo kwemazuva ese." A. Marshall.
"Economics ndiyo kudzidza kwenzira iyo nzanga dzinoshandisa zviwanikwa kushomeka kugadzira zvinhu zvakakosha nekuzvigovera pakati pevanhu vakasiyana." P. Samuelson (akahwina Mubayiro weNobel).
"Sayenzi yezvehupfumi inyaya yekudzidza nezvehunhu hwevanhu sehukama pakati pemagumo uye nzira dzinoshomeka uye dzinogona kushandiswa zvimwe." L. Robbins.
Iyo yekupedzisira ndeimwe yeanonyanya kushandiswa mune zvehupfumi basa.
Mukupedzisa, tinogona kutaura izvozvo economics ndiko kuranga kunodzidza mashandisiro anoita zvinhu kuvanhu kuti zvigutse zvido. Panguva imwecheteyo, zvakare iri basa rekuongorora maitiro nezviito zvinoitwa nevanhu zvine chekuita nezvinhu.
Semuenzaniso, hupfumi hwaizove icho chidzidzo chinoitwa munharaunda kuti izive kuti yakarongeka sei kugutsa zvido zvevanhu, zvese mune zvekushandisa uye zvisirizvo zvekushandisa zvinodiwa, kubata nekugadzira, kugovera, kushandisa uye, nekupedzisira, kuchinjana kwezvinhu nemasevhisi.
Mushure mekuona dzakasiyana tsananguro dzekuti chii hupfumi, chingave chiri pachena kwauri ndechekuti vese vane akateedzana maitiro akafanana. Izvi ndeizvi:
Tora economics sesainzi rezvemagariro. Izvi zvinodaro nekuti, kana iwe ukacherekedza, ivo vese vanotaura nezvekudzidza kwehunhu hwevanhu senzanga.
Dzidza zviwanikwa zvine nyika. Izvi zvishoma, uye zvinoenderana nezvinodiwa nemunhu mumwe nemumwe, pamwe nehunhu hwavo, kunyangwe zvapera kana kugoverwa nekudyiwa mushe.
Funga nezvezvisarudzo zvemari, kunyanya nekuti inoongorora maitiro angaite munhu kana paine kushomeka kwechimwe chakanaka kana sevhisi.
Zvino zvaunenge wave nekunzwisisa kuri nani kwekuti economics chii, iwe unofanirwa kuziva kuti kwakatangira izwi iri, uye nei kwakamuka. Kuti tiite izvi, isu tinofanirwa kudzokera kune zvekare zvekare zvaive muMesopotamia, Girisi, Roma, maArabhu, maChinese, maPersia nemaIndia.
Chaizvoizvo vakatanga kushandisa izwi rekuti "hupfumi" vaive maGiriki, uyo akaishandisa kureva manejimendi manejimendi. Panguva ino, vazivi vakaita saPlato kana Aristotle vakagadzira tsananguro dzekutanga dzehupfumi nepo nekufamba kwenguva, pfungwa iyi yakakwenenzverwa. MuMiddle Ages, semuenzaniso, paive nemazita mazhinji aipa ruzivo rwavo uye nzira yavo yekuona sainzi iyi, saSanta Thomas Aquinas, Ibn Khaldun, nezvimwe.
Asi, chaizvo, economics sesainzi haina kubuda kusvika XNUMXth century. Panguva iyoyo Adam Smith ndiye "mutadzi" uyo hupfumi hwaionekwa saizvozvi pakutsikisa bhuku rake, "Pfuma Yemarudzi." Muchokwadi, nyanzvi zhinji dzinotsanangura kuti kuburitswa kweichi kwaive kuberekwa kwehupfumi sesainzi yakazvimirira, isina kubatana neuzivi pachahwo.
Iyi tsananguro yezvehupfumi inozivikanwa nhasi seyekare economics, uye imhaka yekuti ikozvino kune akati wandei ehupfumi mafambiro
Mukati mehupfumi, zvikamu zvakasiyana zvinogona kusiyaniswa, semuenzaniso, maererano nenzira, zvinoenderana nenzvimbo yekudzidza, mafirosofi mafashama, nezvimwe. Kazhinji, mukati meiyo hupfumi iwe yaunowana:
Microeconomics uye Macroeconomics. Idzi ndidzo pfungwa dzinozivikanwa kwazvo uye dzinoreva zviito zvinoitwa nevanhu, makambani nehurumende kugutsa zvido nekugadzirisa kushomeka kwezvinhu (microeconomics), kana kudzidza kwehurongwa hwenyika uye zviito zvekutengesa, maitiro uye data repasirese yeiyo yese seti (macroeconomics).
Dzidziso uye dzehupfumi hupfumi. Rimwe boka hombe ndere iro rinosanganisa hupfumi hwemhando dzemhando (dzidziso) uye izvo zvakavakirwa pa "chokwadi" uye zvinopesana nedzidziso dzeyaimbove (empirical).
Zvakajairika uye zvakanaka. Uyu musiyano wakavakirwa pamusoro pezvose pakuve kwehupfumi. Nepo yekutanga ichinyatsoteedzera iyo mirawo inoratidzira hupfumi, mune yechipiri zvazvinoita iko kushandisa shanduko pfungwa sekushandurwa kwevanhu nevanhu.
Orthodox uye heterodox. Iko kune mutsauko padanho redzidzo. Yekutanga inoreva kuhukama pakati pekufunga, munhu, uye nemwero uripo pakati pezviviri; nepo wechipiri uchititaurira nezvezvinoyerera zvinovakira kudzidza kwavo kumasangano, nhoroondo uye chimiro chemagariro chinomuka munharaunda.
Yetsika, yepakati, musika kana musanganiswa hupfumi. Kune vazhinji, uku ndiko kupatsanurwa kwakanyanya kwehupfumi, uye hwakavakirwa pamhando ina dzakasiyana, kuve:
Yetsika: ndiyo inonyanya kukosha, uye inoongorora hukama pakati pevanhu nezvinhu nemasevhisi.
Centralized: inonzi zvakadaro nekuti simba rakabatwa nemufananidzo (Hurumende) uye ndiro rinodzora zviito zvese zvehupfumi zvinoitwa.
Musika: haidzorwe neHurumende asi inotongwa zvichibva pakupa uye kudiwa kwezvinhu uye masevhisi.
Yakavhenganiswa: imubatanidzwa wezviviri zvezviri pamusoro, zvakarongwa (kana zvepakati) nemusika. Mune ino kesi, icho chikamu chehurumende kudzora uye mutemo.
Zviri kujekesa kwauri kuti chii hupfumi?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » General hupfumi » Chii chinonzi hupfumi
Maitiro ekuwana iyo inoshanda kambani hupenyu ripoti